Ɔde Kɔmaa Romafo 7:1-25
Wonni Mmara no ase bio; ɛho mfatoho (1-6)
Mmara no maa bɔne daa adi 7-12)
Bɔne ne me reko (13-25)
7 Anuanom, enti munnim sɛ bere a onipa te ase no, Mmara no di no so anaa? (Efisɛ merekasa akyerɛ wɔn a wonim mmara.) 2 Ɔbea warefo sɛɛ, sɛ ne kunu te ase a, mmara akyekyere no afam ne kunu no ho. Nanso sɛ ne kunu no wu a, wɔasan no afi ne kunu no mmara ho.+ 3 Ne saa nti, bere a ne kunu te ase no, sɛ ɔkɔyɛ ɔbarima foforo dea* a, wɔbɛfrɛ no ɔwaresɛefo.+ Nanso sɛ ne kunu wu a, ɔnhyɛ ne mmara ase bio. Enti sɛ ɔkɔyɛ ɔbarima foforo dea* a, ɔnyɛ ɔwaresɛefo.+ 4 Ɛno nti, me nuanom, mo nso, wɔnam Kristo nipadua so akum mo ama Mmara no, sɛnea ɛbɛyɛ a mobɛyɛ obi foforo dea.+ Ɔno na wonyan no fii awufo mu,+ sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛsow aba ama Onyankopɔn.+ 5 Na bere a na yɛyɛ nea ɔhonam pɛ no, akɔnnɔ bɔne a Mmara no nyan no no yɛɛ adwuma wɔ yɛn nipadua* mu, na ɛma yɛsow aba a ɛkɔ owu mu.+ 6 Nanso afei de, wɔasan yɛn afi Mmara no ho,+ efisɛ yɛawu ama nea na akyekyere yɛn no, sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛfa honhom no so ayɛ nkoa wɔ ɔkwan foforo so,+ na ɛnyɛ ɔkwan dedaw a egyina mmara a wɔakyerɛw no so.+ 7 Enti dɛn na yɛnka? Mmara no yɛ bɔne anaa? Daabida! Nokwasɛm ne sɛ, ɛnyɛ Mmara no a, anka minnim bɔne.+ Ɛho nhwɛso ni: Sɛ ɛnyɛ Mmara no na ɛkae sɛ, “Mma w’ani mmmere ade”+ a, anka minnim anibere. 8 Nanso mmara no nti, bɔne nyaa kwan maa anibere nyinaa bi kɔɔ so wɔ me mu, efisɛ sɛ mmara nni hɔ a, na bɔne awu.+ 9 Nokwarem no, bere bi a na mmara nni hɔ no, na mete ase. Nanso bere a mmara no bae no, bɔne baa nkwa mu bio, na me de, miwui.+ 10 Na mmara a ɛsɛ sɛ ɛde me kɔ nkwa mu+ no, mibehui sɛ ɛde me kɔ owu mu mmom. 11 Na mmara no nti, bɔne nyaa kwan daadaa me, na ɛnam so kum me. 12 Enti Mmara no ankasa de, ɛyɛ kronkron, na mmara asɛm no yɛ kronkron, ɛteɛ, na ɛyɛ papa.+ 13 Ɛnde, adepa de me kɔɔ owu mu anaa? Daabida! Bɔne mmom na ɛyɛɛ saa, sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛda adi sɛ bɔne na ɛnam adepa so de owu baa me so,+ na ama bɔne afa mmara asɛm no so ada ne ho adi sɛ bɔne yɛ amumɔyɛ kɛse paa.+ 14 Na yenim sɛ Mmara no yɛ honhom mu ade, nanso me de, meyɛ ɔhonam a wɔatɔn me ahyɛ bɔne ase.+ 15 Na nea meyɛ no, mente ase. Efisɛ nea mepɛ no, ɛnyɛ ɛno na meyɛ, na mmom nea mikyi na meyɛ. 16 Sɛ nea mempɛ na meyɛ a, ɛnde migye tom sɛ Mmara no ye. 17 Nanso nokwasɛm ne sɛ, seesei ɛnyɛ me ara na meyɛ saa nneɛma no, na mmom ɛyɛ bɔne a ɛte me mu no.+ 18 Na minim sɛ me mu, kyerɛ sɛ, me honam mu de, biribi pa biara nte mu; efisɛ mepɛ sɛ meyɛ adepa, nanso minni tumi a mede bɛyɛ.+ 19 Na adepa a mepɛ sɛ meyɛ no, menyɛ, na bɔne a mempɛ no, ɛno mmom na meyɛ. 20 Na sɛ nea mempɛ sɛ mɛyɛ na meyɛ a, ɛnde na ɛnyɛ me na meyɛ bio, na mmom ɛyɛ bɔne a ɛte me mu no. 21 Enti mihu mmara yi wɔ me ho. Ɛne sɛ: Sɛ mepɛ sɛ meyɛ nea eye a, nea enye na ɛwɔ me mu.+ 22 Me mu de, m’ani gye Onyankopɔn mmara ho yiye,+ 23 nanso mihu mmara foforo bi wɔ me nipadua* mu. Saa mmara no ne mmara a ɛwɔ m’adwene mu no ko,+ na ɛde me yɛ akoa ma bɔne mmara+ a ɛwɔ me nipadua* mu no. 24 M’asɛm yɛ mmɔbɔ! Nipadua a ɛde me rekɔ saa owu yi mu no, hena na obegye me afi ne nsam? 25 Aseda mfa yɛn Awurade Yesu Kristo so nka Onyankopɔn! Afei me ara mede m’adwene ayɛ akoa ama Onyankopɔn mmara, na mede me honam ayɛ akoa ama bɔne mmara.+
^ Anaa “ɔkɔware ɔbarima foforo.”
^ Nt., “akwaa.”
^ Anaa “m’akwaa.”